သင့် ကွန်ပျူတာ registry အတွက် Geniune registry doctor ~ မိုးညိုသား
သင့် ကွန်ပျူတာ registry အတွက် Geniune registry doctor
11:42 PM pc software များ No comments
registry အတွက် Genuine registry doctor လာပါပြီ ။ ဒီဆော့ ဝဲလေးက Windows 2000 / XP / Vista /7/ 8 တွေမှာ အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်လည်း သိပ်မကြီးပါဘူး (5MB )
ပဲ ရှိပါတယ်။ သူ့ ကိုအသုံးပြု မယ်ဆိုရင် မိမိတို့windows system တစ်ခု လုံးကို မှားယွင်းနေတဲ့error တွေ ကို အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းပေးနိုင်မဲ့ ဆော့ ဝဲကောင်းလေးပါပဲ။အသေးစိတ် ကိုအောက်မှာ ဆက်ဖတ်ပေးပါ။
Automatically scan and sweep your system errors.
A better-kept and neat registry.
Improved PC functionality.
Size: 5,31 Mb.
ဒေါင်းလုပ်ယူရန် zippyshare , solidfiles